ဘဝဆိုတာဘာလဲ — Steemit
ကျွန်တော်တို့ဟာလူသားမြားသညျသိအဖြစ်ဘဝ, ရှုထောင့်အပေါ်အခြေခံပြီးမျက်နှာစာများနှင့်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝတစ်ဦးချင်းစီလူတစ်ဦးအဘို့ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ မကျွန်တော်ကိုတနေ့ထက်တနေ့ရှိသည်သောအသက်တာ၏ကြင်နာပေမယ့်ဘယ်အရာကိုဘဝတစ်ဘက်စုံအသိဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထင်ယောင်ထင်မှားတစ်စီးရီးဖြစ်သနည်း ဘဝကိုငါတို့ဝိညာဉ်များအတွက်ရုံမျက်နှာဖုံးလား? ဘဝတစ်ကိုယ်ခန္ဓာ၏သင်္ဘောအတွင်း, ဝိညာဉ်ကိုလား? ကျွန်မအသက်ပေတည်းယုံကြည်ဘယ်အရာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
အသက်တာအတော်ကြာအလွှာရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်တော်သာစင်ကြယ်သောသတိဖြစ်ပါသည်။ အတွေး, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ကိုယ်ထင်ရှားအာရုံကျော်လွန်ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာသတိဖြစ်ကြသည်။ ငါနက်ရှိုင်းသောဆင်ခြင်သို့ဆည်းပူးခဲ့ကြသောအခါငါစင်ကြယ်သောဝိညာဏ်ရောက်ရှိနေသောကြောင့်ငါသည်ဤငါတို့သိကြ၏။ ငါကလူတိုင်း, သူသို့မဟုတ်သူမ၏အနှစ်သာရအတွက်, ဒီ ဖောက်ပြန်, Non-များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ဒါကကျနော်တို့လူကြီးများအဖြစ်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်ရောက်ရှိဖို့မထင်နိုင်ပါတယ်သော်လည်း, ကိုယ်ပိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးအလွှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မွေးကင်းစအလိုအလျှောက်ဒီပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ကဒီပြည်နယ်၌နေသောတစ်ခုအသိအမြင်မရှိကြပါဘူး။ ငါပြည့်စုံရာဘဝရှိခြင်းဖို့အဓိကသော့ချက်ကဒီပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိရန်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှကပြန်လာစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။
စင်ကြယ်သောဝိညာဏ်ပြီးနောက်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အာရုံနှင့်အမြင်ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့သညျ "ငါတို့သည်ငါတို့၏အလောင်းတွေဖြစ်ကြသည်။ " သူကဆိုသညျကားဖို့ခက်ခဲပြီးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်များနှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အလောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဏ်သယ်ဆောင်ကြောင်းရေယာဉ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာတဝိုက်အခြားလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူအများစုဟာသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမြင်ရသူတို့အလောင်းတွေဖြစ်ကြောင်း, သို့မဟုတ်ပါကမိမိတို့၏ဘဝကြောင်းကိုထင်ပါတယ်။ အလောင်းတွေပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်, စင်ကြယ်သောဝိညာဏ်အချိန်စမ်းသပ်မှုဆိုလိုတာပါ။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီဖြစ်လျက်ရှိအတွင်းတစ်တစ်လောကလုံးအရာဖြစ်၏။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အာရုံနှင့်အမြင်ပြီးနောက်, ငါတို့သည်ငါတို့၏အတှေးရှိသည်။ အတှေးအတုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်မှုဖို့ထက် ပို. ဘာမျှနှင့်သတ္တဝါတွက်ချက်ရန်အဘို့အတစ်လမ်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတှေးအဖို့အရေးကြီးပုံကိုအများကြီးပေးပေမယ့်တကယ်တော့သူတို့အများစုကျပန်းနှင့်ထိန်းအကွပ်မဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထိန်းချုပ်ထားအတွေးတွက်ချက်မှုကပါဝင်ပတ်သက်နေပြီးတခါတရံကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရန်သွားကြသည်အရာကိုသတိရွေးချယ်မှုပေးပါ။ သို့သော်အားဖြင့်၎င်း, ကြီးမားတဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုစင်ကြယ်သောဝိညာဏ်၏အခြေခံအုတ်မြစ်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏စိတျထဲမှာဂယက်ထကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ငါတို့, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာအနည်းဆုံးကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘယ်သူသည်အဖြစ်ထူးဆန်းကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုစဉ်းစားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုတကယ်တော့အတွက်ထူးခြားတဲ့မရှိကြပေ။ အလားတူအတှေးသို့မဟုတ်တူညီသောအတွေးများကိုသူတို့အားပစ္စုပ္ပန်နှင့်ထိုအတိတ်၏စိတ်ထဲတွင်အတွက်ပွက်ပွက်နေကြသည်။ ထူးခြားတဲ့အတွေး၏တစ်ခုတည်းသောပုံစံတစ်ခုစိတ်ကူးတစ်ဦးဘုရားသခငျ့အရပျမှလျှင်အဖြစ်, ကောက်ကာငင်ကာလာဘယ်မှာလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပင်လှုံ့ဆော်မှုကျနော်တို့နေသောပါဝင်များနှင့်ဘဝကိုယ်နှိုက်ကမပေးပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုကျော်လွန်ပြီးကျနော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ကြသည်။ စိတ်ခံစားမှု, အတှေးအကဲ့သို့ပင်အခြေအနေတုံ့ပြန်မှုအချိန်အများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစဟော်မုန်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းဓာတုတုံ့ပြန်မှုကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်မှချိတ်ဆက်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုများမှာယူဆဖို့မမှန်ကန်ပါ။ စိတ်ခံစားမှုသို့သော်သူတို့တုံ့ပြန်မှုထက်မပိုပါ, အစွမ်းထက်နှင့် ဖြစ်ကြသည်။ စိတ်ခံစားမှုကိုသင်စင်ကြယ်သောဝိညာဏ်၏ပြည်နယ်ဖြစ်သည့်အခါသကဲ့သို့အံ့သြစရာအံ့သြစရာ, ဒါပေမယ့်မရှိကြပေ။
ဤသုံးပါးရှုထောင့်-ကိုယ်ထင်ရှားအာရုံနှင့်အမြင်, အတွေး, နှင့်အတ္တနှင့် စိတ်ခံစားမှု-ဖန်တီးပါ။ အဆိုပါအတ္တကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဖန်တီးကျနော်တို့ဒီကနေသီးခြားနှင့်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်လုသောငါတို့ဝိညာဏ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ။ ငါဆင်းရဲသားလူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို" ဒီလို "ငါသောကြာနေ့ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကိုစားလို့မရဘူး" သို့မဟုတ်သောကြောင့်စိတ်တွင်အခြေအနေများစေသည်သို့သော်အလုံးစုံတို့သည်အတ္တနှင့် superego ကိုယျ့ကိုယျကိုအကြောင်းကိုလက်ခံခဲ့သည်အတှေးအများ၏စုဆောင်းခြင်းမှတဆင့်ထုတ်လုပ်ကြသည်။
ဤရွေ့ကားအသက်တာသည်အဘယ်အရာပါဝင်သည်သောမိမိကိုယ်ကို, အပေါငျးတို့သအလွှာဖြစ်ကြသည်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျဤဘဝကျွန်တော်တွေ့ကြုံခံစားကြောင်းသည်အဘယ်အရာသို့ဆည်းပူးကြပြီမဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ခံစားရသည်။ ဒီစကြဝဠာမှာတစ်ခုချင်းစီသတ္တဝါသည်ဤအာရုံကြောင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက်လက်တွေ့တွေ့ကြုံရသည်။ ထို့နောက်အဖြစ်မှန်ကဘာလဲ? ငါစစ်မှန်တဲ့အဖြစ်မှန်ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများမှတဆင့်မည်သည့်ယခုအချိန်တွင်သို့အသာပုတ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်ကောက်ကာငင်ကာနိုငျသောစင်ကြယ်သောသတိဖြစ်ပါသည်ယုံကြည်ပါတယ်။
သောအဖြစ်မှန်ပျောက်ဆုံးလိမ့်မယ်လို့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သည်ဘဝဘဝအလွှာအားလုံး၏စုစည်းဖြစ်ပါသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ အတှေးအ, စိတ်ခံစားမှု, အလောင်းတွေ, အတ္တနှင့် အတူ, အဖြစ်မှန်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဖြစ်ဟုဆိုသည်နိုင်ပါသည်။ အဲဒါကိုသို့ဝင်သောသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်သို့သော်ရည်မှန်းချက်အဖြစ်မှန်, စင်ကြယ်သောသတိဖြစ်ပါသည်။
#artzone #wafrica #life #meaningful